Vivo dia manolotra amin'ny 17 septambra FunTouch OS 9.1 amin'ny fomba ofisialy | Androidsis
Handao antsika telefaona mahasoa maromaro i Vivo tamin'ity herinandro ity, toy ny NEX 3 sy NEX 3 5G ka hitombo tsy ho ela ny isan'ireo telefaona findainy. Na dia tsy izany ihany no handaozan'ny mpanamboatra sinoa antsika tsy ho ela. Satria voamarina fa hanolotra ny kinova vaovao fanaingoana azy ireo amin'ity herinandro ity izy ireo.
Funtouch OS 9.1 no ho ny kinova fanavaozana ny sosona fanaingoana an'ny telefaona Vivo. Tsy mila miandry ela intsony vao hahafantatra azy isika, satria ho ofisialy rahampitso 17 septambra. Ka afaka mahita ny vaovao handao antsika isika.
Tsy hafahafa raha ilay vaovao Vivo NEX sy NEX 5G dia ho avy miaraka amin'i Funtouch OS 9.1 amin'ny fomba ofisialy ho toy ny sosona fanaingoana. Raha ny marina, ny marika dia naneho izany tamin'ny horonan-tsary nakarina. Na dia hatreto aza mbola tsy nisy ny fanamafisana momba azy.
Ity kinova vaovao an'ny Funtouch OS ity dia ho fanavaozana kely fotsiny, satria azo antoka fa tsy ilay kinova mifototra amin'ny Android 10. Fa hampiditra fanatsarana kely momba ny Funtouch OS 9. Fa ny ho fanatsarana izay hatomboka dia tsy fantatra.
Soa ihany fa rahampitso isika hanana fisalasalana satria efa nanambara i Vivo fa ho ofisialy izany. Na dia azo antoka aza telefaona no mahasarika ny sain'ny olona ary tsy ny sosona fanaingoana azy vaovao, indrindra raha fanavaozana kely izany satria antenaina fa amin'ity tranga ity.
Mampalahelo fa toy ny mahazatra amin'ny tranga Vivo, ireo maodely ireo dia azo inoana fa tsy havoaka any Eropa. Satria ny orinasa dia tsy misy eto amintsika, ny maha-tsena any Azia toa an'i Shina na India no zava-dehibe indrindra amin'ny mpanamboatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Rom » Vivo dia hampiditra ny Funtouch OS 9.1 amin'ny 17 septambra
Ny elanelan'ny Realme 5 dia mpivarotra be indrindra any India
Samsung handefa telefaona clamshell avo lenta